Isikhokelo se-Roller yeSixeko Abavelisi kunye nabathengi - ishini-shishini - iDihoo Industry.
Ikhaya > Iimveliso > I-Roller Guide Rails
I-RIHOO ngumvelisi waseTshayina wee-rails guide guide, ukunikezela ngeendlela zokuhamba ngokuchanekileyo kunye nempahla, kwaye unakho phantsi kweemfuno zabathengi ukuvelisa izisombululo kwi-design yokwenza. Senza isitokethi seemveliso ezithile ezikhethiweyo-iikholeji zengqungquthela yokuhamba, nokuba ufuna into encinci, sinokukunikezela ngexesha lokunikela ngokukhawuleza.
Oku kulandelayo malunga ne-OSG Series Guide Rails enxulumene, ndinethemba lokukunceda uqonde ngcono I-OSG Series Guide Rails.
Oku kulandelayo malunga ne-LSGD Series Guide Rails enxulumene, ndiyathemba ukukunceda uqonde ngcono I-LSGD Series Guide Rails.
Oku kulandelayo malunga ne-SGR Series Guide Rails enxulumene, ndiyathemba ukuba kuya kukunceda uqonde ngcono I-SGR Series Rail.
Oku kulandelayo malunga ne-Flat Strips Guide Rails echaphazelekayo, ndiyathemba ukukunceda ukuba uqonde kakuhle i-Flat Strips Guide Rails.